कहिले खुल्ला सार्वजनिक यातायात ? यस्तो छ यातायात विभागको तयारी - Sidha News
कहिले खुल्ला सार्वजनिक यातायात ? यस्तो छ यातायात विभागको तयारी
काठमाडौं। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्यान्वयन गरिएको लकडाउनका कारण लामो समय देखि थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधनहरु संचालन गर्ने टुंगो अझै लागेको छैन।
दिनहुदिन कोरोना सं’क्रमि’तहरु बढिरहेकाले सरकारले सार्वजनिक यातायात कहिले संचालन गर्ने भन्ने बारे अहिले सम्म टुंगो लगाएको छैन। ‘सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्छन् भन्ने टुंगो लागेको छैन ।’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने निर्णय गर्ने वित्तिकै विभाग तयारी अवस्थामा रहेको छ। ‘हामी यातायात संचालन गर्न तयारी अवस्थामा छौँ ।’ महानिर्देशक हमालले भने।
सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न छलफल गरिरहेको र आवश्यक पर्ने वित्तिकै संचालन गर्न तयार रहेको विभागको भनाइ छ । विभागले कार्यविधी नै बनाएर सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न छलफल गरिरहेको छ । सो कार्यविधी अनुसार यात्रुहरुलाई सुरक्षित यात्रा गराउन यात्रुहरुबीच कसरी सामाजिक दुरी कायम राख्ने ? अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने, भाडा दिँदा कसरी दिने, थोरै यात्रु राख्ने लगायतका कुराको पालना गर्नुपर्नेछ । तर सो कार्यविधी पास भने भइसकेको छैन । सो कार्यविधी पास भइसकेपछि प्रक्रिया अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।
सरकारले लकडाउनको तीन महिना पुग्नै लाग्दा सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सक्रियता बढाएको छ । सार्वजनिक यातायात कसरी संचालन गर्ने भन्दै सरकारले त्यस विषयमा सक्रियता बढाएको हो । सरकारले सबैभन्दा कम प्रभावित क्षेत्रबाट सार्वजनिक यातायात संचालन सुरु गर्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी जोखिम (रेड जोन), मध्यम जोखिम (एल्लो जोन) र जोखिम नै नभएको (ग्रीन जोन) पहिचान गर्नेछ । त्यसकै आधारमा सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘रेड, एल्लो र ग्रीन जोन यसअघि नै छलफल भएको महानिर्देशक हमालको भनाइ छ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको छ । जसमा ८ खर्ब रुपैँयाँ बैंकहरुको लगानी छ । लामो तथा छोटो दूरीका गरी ३ लाखभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ग्यारेजमा थक्किएर बसेका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा ६० लाख भन्दा बढी मजदुरहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।लामो समयसम्म सवारी साधन थन्किएकाले ८० प्रतिशत सवारी मर्मत गर्नूपर्ने अवस्था आएको छ भने लकडाउन खुलेर सरकारले सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने निर्णय गरे पनि तत्काल संचालन गर्न भने समस्या पर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । सार्वजनिक यातायात संचालन गर्दा चालक, सहचालक तथा यात्रुहरुको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान पु¥याइनु पर्ने महासचिव सिटौलाको भनाइ छ।
प्रभु बैंकले नेपालभरका २२ ठाउँकाे घर जग्गा लिलामी गर्दै
मेरो सरकारमा प्रचण्डको सम्पति छानविन गर्छु : ओली